ट्विटरमा ग्रुप डिएम तथा भिडियो ट्विट सुविधा थपियो
Aakar February 08, 2015
१४० क्यारेक्टर मात्र लेख्न मिल्ने ट्विटरमा, ट्विटबाट सिधै भिडियो ट्विट गर्न मिल्ने सुविधा थपिएकोछ । यसका अतिरिक्त 'ग्रुप डिएम' सुविधा पनि ट्विटरले थपेकोछ । ट्विटर भन्दा पछि आएका विच्याट, लाइन आदि च्याट मेसेजिङ एपहरुका प्रयोगकर्ता ट्विटरको भन्दा धेरै छन् । ट्विटरमै भएका साथीहरुले पनि समूहमा म्यासेज पठाउनु पर्यो भने, विच्याट, भाइवर जस्ता अर्को मेसेजिङ एपहरु चलाउनुपर्ने बाध्यता थियो । पछिल्ला च्याट एपहरुले गरेको प्रगतिको अनुपातमा, ट्विटरले 'डिएम' (Direct Message) बाट लाभ लिन नसकेको/समयानुकुल सुधार नगरेको, प्राइभेट म्यासेजिङलाई वेवास्ता गरेको, वा भनौँ "माल पाएर पनि चाल नपाएको" आरोप लाग्दै आएको थियो । तर ढिलै सही ट्विटरको वर्षौँ अघिको प्रण अनुरुप, ट्विटरले अघिल्लो साता 'ग्रुप डिएम' सार्वजनिक गरेको हो । ट्विटरको ग्रुप डिएम मार्फत एकपटकमा २० जनासम्म कुरा गर्न सकिन्छ । ट्विटरमा आफूलाई फलो नगरेको व्यक्तिलाई डिएम पठाउन सकिन्न तर डिएम ग्रुुप च्याटमा सहभागी भएका अन्य फलोअर्सहरुले भने एक-आपसमा सबैलाई फलो गरेकै हुनु पर्ने बाध्यता छैन, एक-आपसमा फलो नगरिएको भएपन
उनो कार्ड - छुटको बहार
Aakar February 07, 2015
झम्सिखेलको एक रेष्टुरेन्टको भित्तामा एउटा 'क्युआर' (QR) कोड टाँसिएको थियो, खानेकुरा अर्डर गर्नु भन्दा पहिले नै मैले मोबाइलमा 'क्युआर ड्रोइड' एप खोलेर उक्त 'क्युआर' कोड स्क्यान गरेँ, १२ प्रतिशत छुट भनेर स्क्यानरले देखायो । मेनु हेरेर केही खानेकुरा अर्डर गरियो, बिल तिर्नेबेला एउटा डिस्काउन्ट कार्ड देखाएँ, वेटरले १२ प्रतिशत छुट दिएको बिल ल्याए। मनमा केही शंका - उपशंका रहँदा रहँदै, एउटा इन्टरनेट कम्पनीले निकालेको डिस्काउन्ट कार्ड लिएकोथिँए, सोचेभन्दा सरल र सहज रुपमा काम गर्यो । अर्को पटक, जावलाखेलको एउटा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा छिर्दा पनि त्यही कार्ड देखाएँ, त्यहाँ झन् गजब भयो । डिपार्मेन्ट स्टोरमा हरेक 'क्याटगोरी'का लागि फरक फरक छुट रहेछ, कार्ड मार्फत । कपडाको लागि छुट्टै, इलेक्ट्रोनिक्स सामानको लागि छुट्टै, ग्रोसरीका लागि छुट्टै छुटको व्यवस्था रहेछ। त्यसअघि उक्त डिपार्टमेन्ट स्टोर छिर्दा १ रुपैयाँ पनि छुट पाइएको थिएन। छुट पाउनु के थियो, 'दिल गार्डेन गार्डेन' भने झैँ भो । केही अघिसम्म छुटका कार्डहरुमा खासै विश्वास थिएन तर आफूले चाहेको ठाउँमा का
Eureka January 19, 2015
कसो-कसो कता-कता मलाई जिन्दगीको बाटो देखाईदिने ति पुराना दिन याद आयो .. धेरै दिनपछि , सम्झनाका तरेलीहरुमा , चाैर-बिचको बाटो धुसुरका मुन्टाहरुले बढार्दै गाईबाच्छा खेलेको याद आयो .. सर्कस हेर्न क्लास बंक गरेको भोलिपल्ट , ब्ल्याकबोर्डमा इक्वेसन सल्भ गर्न लाउने , गणित सरको याद आयो .. “किटा ! प्राक्टिस पुगेन है तेरो” भन्दै ट्वाकसिङ् लाउने , अंकगणित सरको याद आयो .. गाईबस्तु चराउन जाँदा , अंगेरि खाएर कालोनिलो भएको एकअर्काको मुख हेर्दै , गलल्ल हाँसेको याद आयो .. दाँई गर्ने गोरु धपाउदै परालमा गुडुल्कि खेलेको याद आयो , आहा ! कस्तो मिठो हुन्थ्यो मस्याम र चिउराको खाजा , साँधेको गुन्द्रुकसँगै खाएको याद आयो ... के याद आएन भन्नु धेरै कुरा झल्झलि याद आयो मलाई जिन्दगीको बाटो देखाइदिने ति पुराना दिनको याद आयो ... Contributed by: A friend! Image courtesy: 4to40.com
पृथ्वीनारायण शाहको जिवनी चित्रमा [INFOGRAPHICS]
Aakar January 11, 2015
पृथ्वी जयन्ती तथा एकता दिवसको शुभकामना। नयाँ नेपालको निहुँमा केही वर्ष यता, पृथ्वीनारायण शाह र उनको योगदानलाई अवमुल्यन गरिए झैँ लाग्दैछ, पृथ्वी जयन्ती तथा एकता दिवस मान्न छोडिएकोछ । कसैले मानुन् वा नमानुन् तर २० वर्षको उमेरमा गोरखाका राजा बनेर, नेपाल एकिकरणको अभियान चलाएर, विशाल नेपालको निर्माण गर्ने श्रेय उनैलाई जान्छ । वि. सं १७७९ पौष २७ मा गोरखामा जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट आक्रमण गरेर गोरखा राज्य विस्तार गर्ने कार्यको सुरुवात गरेकाथिए । त्यही राज्य विस्तारको अभियानबाट विशाल 'नेपाल'को निर्माण भएको हो, त्यसैले त आज सगर्व 'नेपाल' र 'नेपाली' भन्न पाइएकोछ । उनले आफ्नो शासनकालमै १८२५ मा काठमाडौँ र ललितपुर अनि १८२६ मा भक्तपुरमाथि बिजय प्राप्त गरेकाथिए । त्यसअघि काठमाडौँका राजा जयप्रकाश मल्लको आग्रहमा, अंग्रेजी सेनाका कप्तान किन्लाकको नेतृत्वमा आएको टोलीलाई गोरखाली फौजले परास्त गरेर सिन्धुलीगढीबाट नै फर्काइदिएका थियो । हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई बिर्सदैँ गएको अवस्थामा, पृथ्वी जयन्तीको अवसर पारेर ग्राफ नेपालले आफ्नो नयाँ इन्फोग्राफिक (तलको फोटो)
नेपालमा सरकारी जागिर'को क्रेजको बारेमा मैले केही बताउन पर्दैन। केही वर्ष अघि 'डक्टर पाइलट' ब्यान्डका, क्रान्ति आले'ले गित नै बनाएकाथिए, "छोरी माग्न जाँदा, बिहे गर्छु भन्दा, ससुरा परे दोधारे, भन्छन् - तिम्रो छ र के भर, खोजिआउ पहिले सरकारी जागिर..." । सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न खुट्टो उचालिरहेकालाई, लोकसेवा आयोगले लिने परिक्षाको खड्गो पार गर्नुपर्छ । एउटा पदका लागि निकालिएको सूचनामा, हजारौँले आवेदन दिन्छन्, कडा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, केहीलाई परिश्रम र भाग्य दुबैले साथ दिन्छ, अनि सरकारी सेवामा छिर्छन् । लोकसेवाको परिक्षाको तयारीका लागि, विषय अनुसारको किताब नि किन्नुपर्यो, त्यसमाथि पत्रिकामा निरन्तर सूचना पनि पच्छ्याउनु पर्यो, कतिपय अवस्थामा लोकसेवा परिक्षाको तयारी कक्षामा नि भर्ना हुनुपर्छ, त्यसका लागि काठमाडौँ नै धाउनुपर्छ । यही विविध झन्झट्हरुबाट परिक्षार्थीलाई छुटकारा दिलाउन र लोकसेवा परिक्षालाई अझ सजिलो र सुलभ बनाउन 'मन्त्र आइडियाज'ले 'लोकसेवा नेपाल' नामक मोबाइल एप निर्माण गरेकोछ । गुगल प्लेस्टोर तथा एप्सझोला मा उपलब्ध लोकसेवा नेपालको एन्ड
तपाईले गुगलको होमपेज याद गर्नुभएको छ? गुगलले केही दिन देखि आफ्नो होमपेजमा सर्चबक्सको तलपट्टि 'एन्ड्रोइड वान' को विज्ञापन (Introducing Android One. A new kind of smartphone) राखेकोछ । विज्ञापनमा राखिएको लिंक क्लिक गर्नुभयो भने, तपाई एन्ड्रोइड वानको नेपाल पेज मा पुग्नुहुन्छ । गुगलले सार्वजनिक रुपमा नेपालमा एन्ड्रोइड वान कहिले उपलब्ध हुन्छ नभनेपनि, विज्ञापन मार्फत जनवरी दोस्रो साता (माघ पहिलो साता) भित्रै उपलब्ध हुने संकेत दिएकोछ । बाहिर १०० डलर भनेर चर्चा गरिएको फोनको नेपाली मूल्य निर्धारण गरिएको छैन, तर इन्टरनेटमा चलेको हल्ला अनुसार एन्ड्रोइड वान फोन ५ देखि १० हजार नेपाली रुपैयाँमा नेपाली बजारमा उपलब्ध हुनेछ । त्यसो त नेपालमा एन्ड्रोइड वान भन्दा कम मुल्यमा विभिन्न ब्रान्डका एन्ड्रोइड फोनहरु पहिले नै उपलब्धछन् । तर अपरेटिङ सिस्टम, डिजाइन अनि हार्डवेयरका कारण ती सेटहरु भन्दा गुगलको एन्ड्रोइड वान उत्कृष्ट भएका कारण, धेरैको रोजाइ हुनजानेछ । एन्ड्रोइड किटक्याट अपरेटिङ सिस्टम सहित नेपाली बजार छिर्ने योजनामा रहेको एन्ड्रोइड वानले, तुरुन्तै एन्ड्रोइडको ललिपप अपडेट पाउनेछ, य
अल्छे भइएको हो, वा व्यस्त भइएको हो, यसै भन्न सक्दिन तर ब्लगमा भने सोचेजस्तो र भनेजस्तो रहेन । तरपनि वर्षको अन्त्यमा भने सँधै अघिल्लो वर्षको समिक्षा गर्ने हुटहुटी चल्छ, हुन त महिनै पिच्छे गरे हुने हो आत्मसमिक्षा। एउटा प्रयोग २०१३ को डिसेम्बर अन्तिमतिर एकजना साथीले 'नेपालको राजनैतिक/सामाजिक समाचार पढ्नुभनेको, आफ्नो बिपी मात्र बढाउनु हो' भन्ने आशयको ट्विट गरेकाथिए । मलाई उनको कुरा ठिकै लाग्यो, अनि मैले पनि वर्षभरि नै समाचार नपढ्ने/नसुन्ने/नहेर्ने वाचा गरेँ आफैँसँग । आफूले फलो गरिएका र लाइक गरिएका अधिकांश समाचार पोर्टललाई अनफलो र अनलाइक गरियो। हरेक रात ८ बजेको टिभी समाचार हेर्ने बानी परेको मैले, यो वर्ष मुस्किलले ५-६ वटा समाचार हेरेँ होला टिभीमा । बिहानको रेडियोको समाचार पनि सुन्न छोडियो । पत्रिका पढ्न छोडियो । ट्विटर र फेसबुकमा साथीहरुले सेयर गरेर, पढ्नैपर्ने भनेर रिकमेन्ड नगरेका बाहेक कुनै लेख सायदै पढियो । समाचारबाट सय प्रतिशत नै टाढा बस्न त सकिएन तर पनि कहिले समाचार खोज्दै कुनै समाचार पोर्टल धाइएन । यतिसम्म भयो कि, पश्चिममा पसेको बाढीसमेत मैले पछि मात्र थाहा पाएँ -- फिल द
जोर नम्बरवाला ट्याक्सी
Aakar December 05, 2014
डिल्लिबजारको ओरालो झरेका गाडीहरु पुतलीसडक चोकमा रोकिएका थिए, ट्राफिक प्रहरीबाट बाटो खुलेको ईशारा पर्खदैँ। त्यहाँ उडेको धुलो अनि खनिएको सडकमा जमेको पानीले आफू कुनै युद्दभूमीमा भएको आभास दिन्थ्यो। तिनकुने वानेश्वर क्षेत्रको सडक सार्क सम्मेलनको तयारीमा जुटिसक्दा पनि पुतलीसडक चोकमा भने धुलो उडिरहेको थियो। पुतलीसडक चोकको धुलो छल्दै अलि अघि बढेँ, ट्याक्सी कुर्न। दिल्ली जानको लागि एयरपोर्ट तीन, साँढे तिन भित्र पुग्नु पर्ने कुरा भएको थियो, "सेक्युरिटी कडा" छ भन्ने सुनिएको थियो सार्क'का कारण। आफूलाई हतार भएको बेला, सबै कुरा ढिलो भए झैँ लाग्छ। करिब १० मिनेट कुरेपछि बल्ल एउटा खाली ट्याक्सी देखियो, हातले ईशारा गरेँ, केही पर गएर ट्याक्सी रोकियो। ट्याक्सी रोकेर चढ्न पनि कहिलेकाँही महाभारत नै पर्छ, फलाना ठाउँ जाने, चिलाना ठाउँ नजाने, यति भन्दा घटि नजाने भनेर अड्को थाप्ने टन्नै ट्याक्सी गुड्छन् काठमाडौँमा। त्यही ट्याक्सीको महाभारत सोचेर, पहिले कलंकी देखि एयरपोर्टसम्म चल्ने साझा यातायातमा एयरपोर्ट जाने प्लान गरेको थिँए तर आफू पौने ३ बजेसम्म पुतलीसडकमै थिँए। साझाको रुट नमिल्ने भए
नेपालमा आज गुगल डे मनाइँदै [INVITATION]
Aakar November 29, 2014
गुगल बिजनेस ग्रुप (जिबिजी) काठमाडौं कम्युनिटिको आयोजनामा आज शनिबार, नेपालमा गुगल डे पहिलोपटक मनाइँदैछ। बिहान १० देखि बेलुका ५ बजेसम्म झम्सिखेल स्थित मोक्षमा चल्ने कार्यक्रममा गुगल टेक्नोलोजीबारे छलफल तथा मोबाइल एप्स प्रदर्शनी हुनेछ। भर्खरै अनिश र मनिषाको स्टार्टअप "यल्लो नेपाल" , जिबिजीको बिजनेस स्टोरिज कम्पिटिसनको फाइनलमा पुगेकोछ। कार्यक्रममा आज यही यल्लो नेपाल, एप्स झोला, पिकोभिको, नेपाली पात्रो, एनलोकेट लगायत विविध कम्पनीहरुले आफ्नो कथा सुनाउनेछन् । नेपालमा गुगल बिजनेस ग्रुपले के गर्दैछ, नेपालमा एन्ड्रोइडको अवस्था कस्तो छ, गुगलले अनलाइनमा आएका बिजनेसहरुलाई अघि बढ्न कसरी सहयोग गर्छ, गुगल टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर अहिले के के भइरहेकोछ, नेपालमा कुन कुन अनलाइन बिजनेस आएकाछन्/आउँदैछन् आदि विविध विषयहरुमा छलफल हुनेछ। कार्यक्रममा गुगलका तर्फबाट, दक्षिण-पूर्वी एसियाको कार्यक्रम हेर्ने इरिका ह्यान्सनको उपस्थिति हुनेछ । यसका साथै, कार्यक्रममा सर्वसाधारणलाई मोबाइल एप्सहरुको जानकारी दिनको लागि मोबाइल एप्सहरुको प्रदर्शनी राखिएकोछ। कार्यक्रमबारे अधिक जानकारीको लागि जिबिजी काठम
नेपाली स्टार्टअप 'यल्लो नेपाल' गुगल स्टोरिज कम्पिटिसनको फाइनलमा -- अब भोटिङ
Aakar November 25, 2014
नेपालका खाना/रेष्टुरेन्ट पारखीहरुका लागि लक्षित गरि अनिश श्रेष्ठ र मनिषा कर्माचार्य ले सुरु गरेको ' यल्लो नेपाल ' स्टार्टअप, गुगल बिजनेस स्टोरिज कम्पिटिसनको फाइनलमा पुगेकोछ। यल्लो नेपाल एप मार्फत, मोबाइलबाटै खानाको मेनु हेर्न, आफ्नो नजिक'को रेष्टुरेन्ट खोज्न, सस्तो डिल्स तथा डिस्काउन्ट भेट्टाउन, काठमाडौमा भइरहेका पार्टि आदि बारेमा थाहा पाउन सकिन्छ । गुगल बिजनेस ग्रुप (जिबिजी)ले केही महिना अघि सुरु गरेको बिजनेस स्टोरी कम्पिटिसनमा ५० भन्दा धेरै देशका सयौँ कम्पनीहरुलाई पछि पार्दै यल्लो नेपाल एप, कम्पिटिसनको फाइनलमा पुगेको हो। यस कम्पिटिसनको फाइनलमा यल्लो नेपाल सँगै अन्य देशका आठवटा स्टार्टअपले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । गुगल'ले ९ वटा फाइनलिस्टबाट ३ वटा उत्कृष्ट स्टार्टअप पब्लिक भोटिङबाट छान्नेछ । छानिएका ३ उत्कृष्ट स्टार्टअपले गुगलबाट ५ हजार डलरको फन्डिङ पाउनेछन्, जसले स्टार्टअपलाई अघि बढ्न ठूलो भरथेग गर्नेछ । नेपालमा स्टार्टअपको कल्चर भर्खर भर्खर सुरु भएको समयमा, गुगल जस्ता ठूलो कम्पनीले साना लोकल कम्पनीलाई यसरी प्रोत्साहन गर्नु स्वागतयोग्य कुरा हो । तर गुगलका